ငါတို့ရှိသမျှသည် Airbnb ၏ငါသိ၏။ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏တစ်ခုလုံးကိုအိမျတျော၌အပိုအာကာသထွက်ငှားရမ်းထံမှလစဉ်လတိုင်းဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ Airbnb နှင့်အတူအိမ်ပိုင်ရှင်လက်တွဲဖော်, ၎င်းတို့၏နေအိမ်များ / အခန်းပေါင်းထွက်စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းစွာပြန်ထိုင်ခြင်းနှင့်ဧည့်သည်များအနေဖြင့်ပိုက်ဆံပါစေ။
ငါသည်သင်တို့ကိုပြောပြလျှင်ယနေ့သင်၏အမော်တော်ယာဉ်အားဖြင့်ထိုအတူလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကဘာလဲ! တူညီသောအယူအဆနှင့်အတူ, သငျသညျကိုပြန်ထိုင်နိုင်ပြီးသင့်ရဲ့ကားကနေအမှန်တကယ်ဝင်ငွေဝင်ငွေ။
Uber နှင့်အခြားတော်လှန်ရေးသမားစတင်များ၏အောင်မြင်မှုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းစုစုပေါင်းပြတ်တောက်အတွက်လမ်းခင်း။ ဒီနေ့ဘဝများကိုပြောင်းလဲနေပါတယ်ဘယ်လိုတစ်ကားငှားရမ်းဆွေးနွေးပါ။
တစ်ဦးကားကားပိုင်ရှင်ထိုင်း၎င်းတို့၏ကားများထုတ်ငှားရမ်းတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတ, စမတ်နှင့်အဆင်ပြေလမ်းပေးသည်ငှားရမ်း။ မော်တော်ကားပိုင်ရှင်များယခုတစ်ပိုင်ဆိုင်မှုသို့ထားတဲ့စရိတ်ကနေသူတို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကကားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဘယ်လောက်အကုန်အကျငါသိ၏။
ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်ယာဉ်ရပ်နားအခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ဖွင့်ပင်အာမခံအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့ရန်။ တောင်မှပိုဆိုး, မော်တော်ကားတန်ဖိုးထားကြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်; အစား, သူတို့ကတစ်ဦးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာမှုနှုန်းမှာတန်ဖိုးလျော့။ ဒါဟာဝယ်ယူစျေးနှုန်းအထက်အမြတ်မှာသင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်ရောင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါပါပဲ။
အများဆုံးကိစ္စများတွင်ပိုမိုထက်နှစ်နှစ်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီကားများထက်ဝက်နီးပါးဝယ်ယူစျေးနှုန်းမှာချွတ်ရောင်းချကြသည်။ စိတ်ထဲအတွက်အတူအဘယျကွောငျ့ကောငျးစှာအသုံးပွုဖို့သင့်ကားထားသည်မဟုတ်လော အဘယ်ကြောင့်သင့်ရဲ့ကားရပ်နားအများကြီးအတွက်ပျင်းရိထိုင်ရှိခြင်းအစားသင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်ကနေတချို့ကောင်းသောပိုက်ဆံအတွက်ကိုပိုကျသည်မဟုတ်လော
သင့်ကားအစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာဖွင့်သော့ခတ်သို့မဟုတ်သင့်သည့်ကားလမ်းပေါ်တွင်ရပ်နေလျှင်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ငှားနေတဲ့ကားပူဇော်ကားတစ်စီးငှားရမ်းပလက်ဖောင်းစေ့စေ့ကြည့်ရှုဖို့သက်တူရွယ်တူ၏အားသာချက်ယူမဟုတ်လော လက်ရှိခွဲဝေမှုစီးပွားရေးကိုကြီးထွားပိုများနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကားပိုင်ရှင်တစ်ဦးအပိုဆောင်းဝင်ငွေအရင်းအမြစ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ rip နိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏မော်တော်ယာဉ်၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသေချာစေရန်ထိုင်းနိုင်ငံကနံပါတ်တစ်အာမခံကုမ္ပဏီနှင့်အတူပူးပေါင်းပါပွီ။ သင်မိနစ်၌သင်တို့၏မော်တော်ယာဉ်စာရင်းပြုစုနိုင်ပါတယ်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးတစ်ချိန်က - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းအသုံးပြုရလွယ်ကူပါ!
iOS နှင့် Android မှာနှစ်ဦးစလုံးအပေါ် app ကိုစတိုးကနေလျှောက်လွှာကို Download လုပ်ပါနှင့်လွယ်ကူသောစာရင်းဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ပါ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူကောငျးမှငွေရှာဖို့အဆင်သင့်ရအတည်ပြုချက်နှင့်တစ်ချိန်ကအားလုံးသတ်မှတ်ရလိမ့်မယ်။ ထိုအရပ်မှ, သင်၏ကားကို pre-ဆောင်စိစစ်ပြီးအားဖြင့်ငှားရမ်းထားခြင်းနှင့်ငှားရမ်းအတည်ပြုလိမ့်မည် မရင့်မည်သူမဆို။
ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာရနျကြှနျုပျတို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများစာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်။ သင်သည်မည်သည့်မေးမြန်းချက်ရှိပါကအားလုံးသင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်အထောက်အပံ့ကိုအသင်းနှင့်အတူဖြေကြားရ။ သင်တို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာတတ်နိုင်သမျှမဆိုလမ်းအတွက်အထောက်အကူပြုဖို့အလိုရှိပါလိမ့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။